Munyengetero wemunyori wepisarema unonzwiwa
‘Jehovha, simba rangu nenhoo yangu’ (7)
Rwiyo rwaDhavhidhi. 28 Ndinoramba ndichishevedzera kwamuri, haiwa Jehovha, Dombo rangu;+Ndinzweiwo. Kana mukaramba makandinyararira,Ndinenge ndangofanana nevaya vari kudzika kugomba.*+ 2 Inzwai kuteterera kwangu pandinochemera kubatsirwa nemiNdichisimudzira maoko angu kuimba yemukati yenzvimbo yenyu tsvene.+ 3 Musandizvuzvurudza pamwe chete nevakaipa, vanoita zvinhu zvisina kunaka,+Vaya vari kutaura zvinhu zverugare nevamwe vavo asi mumwoyo mavo muine zvinhu zvakaipa.+ 4 Vatsivei maererano nezviito zvavo,+Zvinoenderana nemabasa avo akaipa. Vatsivei mabasa emaoko avo,Maererano nezvavakaita,+ 5 Nekuti havaise pfungwa dzavo pamabasa aJehovha,+Kana pabasa remaoko ake.+ Iye achavaputsa uye haazovavaki. 6 Jehovha ngaarumbidzwe,Nekuti anzwa kuchema kwangu ndichida rubatsiro. 7 Jehovha ndiye simba rangu+ nenhoo yangu;+Mwoyo wangu unovimba naye.+ Ndakawana rubatsiro rwake, uye mwoyo wangu uri kufara,Saka ndichamurumbidza nerwiyo rwangu. 8 Jehovha ndiye simba revanhu vake;Iye inhare uye anounza ruponeso rukuru kumuzodziwa wake.+ 9 Ponesai vanhu venyu, mukomborere nhaka yenyu.+ Vafudzei, muvatakure mumaoko enyu nekusingaperi.+